သင်ရိုးညွှန်းတမ်း | အန်းဂျပန်စာသင်ကျောင်း
စာသင်ကြားလိုသောကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများသည်အဓိကအရေးကြီးသောသူများသာဖြစ်သည်။ဘယ်လောက်ပဲစကားလုံးဝေါဟာရများကိုကျွမ်းကျင်တက်ရောက်နေပါစေမိမိကအဓိကအရေးကြီးသောအသိပညာများကိုမရှာဖွေပါကစာသင်ကြားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။အန်းဂျပန်စာသင်ကျောင်းတွင်(ဂျပန်စာသင်ကြားချင်တယ်)လို့ဆိုကြတဲ့တစ်ဦးချင်းစီ၏ဆန္ဒနှင့်လိုက်၍ထပ်မံပြီးအမြဲတမ်းရည်ရွယ်ချက်ကိုမမေ့စေရန်သင်ကြားနိုင်အောင်(National syllabus)ကိုသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုအသုံးပြုနေ ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်တဦးတယောက်နှင့်ဆက်ဆံပတ်သက်မှုတွင်(စကားလုံး)များကိုအဓိကအသုံးပြုကြပါသည်။ထိုအတွက်ဘာသာစကား၊ဘာသာစကားမဟုတ်သောစကားကိုအသုံးပြု၍တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဆက်သွယ်ကြပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းတွင်ကျောင်းသားဘဝ၏အတွေ့အကြုံများဖြစ်သော(အိမ်ခန်းရှာဖွေခြင်း) (ခရီးသွားသောအစီအစဉ်) (ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွင်ပါဝင်ခြင်း) (တက္ကသိုလ်လေ့လာရေးသွားခြင်း) (သုတေသနစာတမ်းဖတ်ခြင်း)စသည့်လူမှုဆက်ဆံရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာခြင်းများကိုပြုလုပ်စေသောကြောင့်လက်တွေ့အတွေ့အကြုံများရရှိပြီးဂျပန်စာလေ့လာမှုကိုလည်းအထောက်အကူပြုပါသည်။
ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများသည်ဆရာ၊ဆရာမများ၏သင်ကြားပို့ချချက်များကိုရရှိသည့်အပြင်တခြားသောကျောင်းသားများမှလည်းအထွေထွေဗဟုသုတများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ဂျပန်စာကျောင်းတွင်ဂျပန်စာသဒ္ဒါသုံးပုံနည်းလမ်းများရှိသည့်အပြင်နိုင်ငံနှင့်လိုက်၍သဒ္ဒါသုံးပုံသုံးနည်းများလည်းကွဲပြားသည်။ကျောင်းသားအချင်းချင်းအတူတကွပူးပေါင်းသင်ကြားမှုအရအသိပညာတိုးတက်မှုကိုရရှိစေရန်အတွက်ကျောင်းမှအမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့လိုက်လှုပ်ရှားမှုများကိုထည့်သွင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်အတန်းအတွင်း Role playing game နှင့်တိုင်းပြည်အသီးသီး၏ယဉ်ကျေးမှုကိုမိတ်ဆက်ပေး သော Presentation တင်ဆက်မှုစသည့်လေ့ကျင့်မှုများကိုလည်းပြုလုပ်ပေးပါသည်။
အခြေခံအဆင့်၁ အခြေခံအဆင့်၂ အခြေခံအဆင့်၃
■HIRAGANA ■အခြေခံခန်းဂျိ ■အခြေခံခန်းဂျိ
■KATAKANA ■အခြေခံဝေါဟာရ၊ဝါကျပုံစံ ■အခြေခံဝေါဟာရ၊ဝါကျပုံစံ
■အခြေခံခန်းဂျိ ■လူမှုဆက်ဆံရေးအရည်အချင်းသင်ကြားမှု ■သဒ္ဒါမှန်ကန်ခြင်း
■အခြေခံဝေါဟာရ၊ဝါကျပုံစံ ■FOURSKILLစွမ်းရည်လေ့ကျင့် ခြင်း ■FOURSKILLစွမ်းရည်လေ့ကျင့် ခြင်း
MINANO NIHONGO Ⅰ MINANO NIHONGO Ⅰ.Ⅱ MINANO NIHONGO Ⅱ J.BRIDGE
အလယ်အဆင့်Ⅰ အလယ်အဆင့်Ⅱ အလယ်အဆင့်Ⅲ
■Level 3ခန်းဂျိ ■Level 3ခန်းဂျိ ■Level 2ခန်းဂျိ
■အလယ်အဆင့်ဝေါဟာရ၊ဝါကျ ■အလယ်အဆင့်ဝေါဟာရ၊ဝါကျ ■အလယ်အဆင့်ဝေါဟာရ၊ဝါကျ
■လူမှုဆက်ဆံရေးအရည်အချင်းသင်ကြားမှု ■လူမှုဆက်ဆံရေးအရည်အချင်းသင်ကြားမှု ■လူမှုဆက်ဆံရေးအရည်အချင်းသင်ကြားမှု
■ဂျပန်စာစွမ်းရည်တိုးတက်အောင်သင်ကြားခြင်း ■FOURSKILLစွမ်းရည်လေ့ကျင့် ခြင်း ■ဂျပန်စာစွမ်းရည်တိုးတက်အောင်သင်ကြားခြင်း
■FOURSKILLစွမ်းရည်လေ့ကျင့် ခြင်း ■ဂျပန်စာစွမ်းရည်တိုးတက်အောင်သင်ကြားခြင်း ■စာတမ်းတို
■အကျဉ်းချုပ် ■ ဟောပြောပွဲ
အလယ်တန်းအဆင့်သို့တက်ကြပါစို့။ အလယ်တန်းအဆင့်သို့တက်ကြပါစို့။ အလယ်တန်းအဆင့်ကိုသင်ယူကြပါစို။့
■Level 1ခန်းဂျိ ■အထက်တန်းအဆင့်ဝေါဟာရ၊ဝါကျ
■လူမှုဆက်ဆံရေးအရည်အချင်းသင်ကြားမှု ■Project Work
BUNKA HE NO MANAZASHI LISTENING.ANNOUNCEMENT WORKBOOK
လုပ်ငန်းခွင်၊ကျောင်း၊အနားယူခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောစကားပြောများတွင်လည်းပြေပြေလည်လည်စကားပြောဆိုနိုင်ပါမည်။အများဆုံးတွေ့ကြုံရမည့်အကြောင်းအရာများနှင့်လိုက်၍တောင်းဆိုခြင်း၊ ခွင့်တောင်းခြင်း၊တောင်းပန်ခြင်းစသောတခြားစကားပြောဆိုရာတွင်အဆင်ပြေစေသောရည်ရွယ်ချကဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင်လွယ်ကူသောစာကြောင်းများကိုနားလည်ပြီးစာကြောင်းကိုတစုတစည်းတည်း ရေးနိုင်အောင်မျှော်မှန်းပါသည်။လှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့်အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခြင်း၊စာရွက်စာတမ်းများစုစည်းပြီးစစ်တမ်းပြုလုပ်ခြင်း၊တင်ဆက်ခြင်းများပြုလုပ်ပါသည်။်
(တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ၊ ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲN1. N2ကိုရည်ရွယ်ပါသည်။)
ဘွဲ့လွန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆက်တက်ရန်အတွက်သုတေသနစီမံကိန်းစာတမ်းကိုရေး၍တက္ကသိုလ်မှညွှန်ကြားချက်ကိုလက်ခံရယူပြီးProfesserကိုရှာရန်လိုအပ်ပါ သည်။ဘွဲ့လွန်တက္ကသိုလ်တွင်ကျောင်းတက်ရန်ဒီလိုမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်သော အရာများလိုအပ်သောကြောင့်အချိန်အလွန်ကြာပါသည်။
Let’s work together to make your dreams come true!
Ikebukuroကျောင်း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန်း 03-3989-0007 ဖက်စ် 03-3982-2014
Narimasuကျောင်း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန်း 03-3975-6021 ဖက်စ် 03-3975-6500
Nerimaကျောင်း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန်း 03-3998-1000 ဖက်စ် 03-3998-1220
HIkarigaokaကျောင်း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန်း 03-3977-1332
（c）2010 An Language School